Wisdom of Dhamma: ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်များမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ
ဒီတစ်ခါတော့ ကောက်နှုတ်ချက်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားဟော ပါဠိတော်တွေထဲက စာဖတ်သူ များ အတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ကောက်နှုတ်ချက်တွေပါ။ တစ်ခါ တစ်ခါတော့ ဘုရားဟော မူရင်းတရား တော်တွေကို ဖတ်ကြရတာ သိပ်ကို အရသာရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ တခြားအကြောင်းအရာတွေကို ဖတ် ချင်ပြန်တာပေါ့လေ။
အမေရိက ဟာဝိုင်ယီ တက္ကသိုလ်က ဗုဒ္ဓစာပေ ပညာရှင် အငြိမ်းစား ပါမောက္ခကြီး David J. Kalupahana ဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ Kalaniya တက္ကသိုလ်ရဲ့ the Institute of Pali and Buddhist Studies ရဲ့ နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲကို လာပါတယ်။ သူ စာတမ်းဖတ်အပြီးမှာ ကျောင်းသား တစ်ယောက်က ဆရာကြီး အခု (အငြိမ်းစာ ယူပြီးပြီဆိုတော့) ဘာတွေ လုပ်နေ ဖတ်နေပါသလဲ လို့ မေးပါ တယ်။ ဒီဆရာကြီးဟာ ထေရဝါဒ၊ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒဿနိကတွေတင် မကဘူး။ အနောက်တိုင်း ဒဿနတွေကို ကျေနေအောင် ဖတ်ထားသူကြီး၊ ဗုဒ္ဓဒဿနကို ကျမ်းပေါင်းများစွာ ပြုစုထားသူကြီး ဆိုတော့ ကျောင်းသားက သိပ်သိချင်တာပေါ့လေ။ ဒီတော့ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခကြီးက ဘာပြန်ဖြေတယ် ထင်ပါသလဲ။
“ကျွန်တော် ရှိသမျှ ဒဿနိကစာအုပ် စာတမ်းတွေ အကုန်လုံး လှူလိုက်ပြီ။ အခုတော့ ဘုရားဟော နိကာယ် ငါးကျမ်းပါဠိတော်တွေကိုပဲ ထိုင်ဖတ်နေတာပါ” တဲ့။
အသစ်တွေ ဘယ်လိုကောင်းကောင်း အဟောင်းကို တလည်လည် လို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ တစ်ခါတရံ ဖြစ်တတ်တာလေးက စဖတ်တော့တော့ စိတ်ပဲ မဝင်စား သလိုလို၊ နားပဲ မလည်သလိုလိုနဲ့။ ဒီတော့ ပစ်ချထားလိုက်တယ် ဆိုပါတော့။ နောက် အတော်လေးကြာလို့ ကောက်ကိုင် ဖတ်မိတဲ့အခါ နှစ်လုံးသားထဲ စီးဝင်သွား၊ နားလည်သွားလိုက်တာများ ပီတိတွေ ပွားရတဲ့ အထိပါ။ ဒီလို အချိန်မျိုး၊ သို့မဟုတ် ဒီလိုလူမျိုးတွေ အတွက်တော့ အထူးကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
လိုအပ်လို့ အကျယ် ဖတ်ချင်ရင် ရှာရလွယ်အောင် ကျမ်းညွှန်းတွေလဲ ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရတွေနှင့် ရင်းနှီးလိုသူတွေ အတွက် အချို့အပိုဒ်တွေကိုတော့ အမေရိကန် ပါဠိ စာပေ ပညာရှင် ဆရာတော် ဘိက္ခုဗောဓိနှင့် ဂျာမန်ဆရာတော် အရှင် ဥာဏပေါဏိက (ပျံလွန်) တို့ရဲ့ အင်္ဂုတ္ထုရ် ဘာသာပြန် ညွန့်ပေါင်းကျမ်းထဲက အနည်းငယ် ကောက်နှုတ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်လေ့ရှိသူများ အတွက် မရည်ရွယ်ပါ)။
ဖတ်မှတ် လေ့လာ၍ ဒေသနာသုတ သာမက အအေးဓာတ်ပါ ရရှိခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒေသနာတော်များမှ မေတ္တာနှင့် ပတ်သက်သည့် ကောက်နှုတ်ချက်များ
"ငါ၏ စိတ်သည် ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်း မဖြစ်စေရ၊ ကြမ်းကြုတ် ယုတ်မာသော စကားကိုလည်း မထွက် ဆိုမိစေရ၊ ဒေါသမသမ်း မေတ္တာလွှမ်းကာ ချမ်းသာကြီးပွားလိုသောစိတ် ထား၍သာ ငါနေမည်။
ထိပါးပြောဆိုလာသူကိုလည်း မေတ္တာစိတ် ဖြန့်လွှမ်းပို့လွှတ်၍သာ နေမည်။ သတ္တလောက တစ်ခုလုံးကို လည်း ကျယ်ပြန့် မြင့်မြတ်၍ ကန့်သတ်ချက်မထင်၊ တွင်း ပြင်ဘေးရန်လည်း မစွက်၊ မေတ္တာစိတ် သက်သက် ဖြင့် ဖြန့်လွှမ်းပို့လွှတ်၍သာ ငါနေမည်" ဟု နှလုံးသွင်း လေ့ကျင့်ကြကုန်လော့။
(ကကစူပမသုတ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ သုတ်တော် အမှတ် ၂၁)။
အစ္ဆရာသင်္ဃာတသုတ်တော်များ (လက်ဖျစ်တစ်တွက်မျှ မေတ္တာ)
ရဟန်းတို့! ရဟန်းသည် လက်ဖျစ်တစ်တွက်ခန့်မျှလည်း မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သောစိတ်ကို အကယ်၍ မှီဝဲအံ့ (ပွားများအံ့။ နှလုံးသွင်းအံ့။)။ ရဟန်းတို့! ဤရဟန်းသည် ဈာန်မှ ဆိတ်သုဉ်း ကင်းကွာမှု မရှိပဲ နေသူ၊ ဘုရားရှင် ၏ သွန်သင်မှုကို လိုက်နာ၍ နေသူ၊ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမတော်ကို လိုက်နာ၍ နေသူ၊ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့ ပေးလှူသော ဆွမ်းကို အချည်းနှီး မဖြစ်စေမူ၍ သုံးဆောင်နေသူဟု ဆိုထိုက်၏။ ထိုမေတ္တနှင့် ယှဉ်သောစိတ်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ လေ့လာ ပွားများကုန်သော ရဟန်းတို့ကို မူကား အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါတော့အံ့နည်း။
(အံ၊ ၁၊ အစ္ဆရာသင်္ဃာတဝဂ်၊ အမှတ် ၃၊ ၄၊ ၅ သုတ်တော်များ)
Monks, if for just the time ofaginger-snapamonk producesathought of loving-kindness, develops it, gives attention to it, suchaone is rightly calledamonk. Not in vain does he meditate. He acts in accordance with the Master's teaching, he follows his advice, and eats deservingly the country's alms-food. How much more so if he cultivates it! (I, vi,3– 5)
(Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi, (Trans & ed.) 2005, Numerical Discoursed of the Buddha, (An Anthology), 4th printing, Vistaar Publication, New Delhi, p. 36.
မေတ္တာသုတ် (မေတ္တာအကျိုး (၁၁) မျိုး)
ရဟန်းတို့ (ဆန့်ကျင်ဘက်မှ) လွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများအပ် ပြုစုပျိုးထောင်အပ်၊ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်၊ ယဉ်ကဲ့သို့ ပြုအပ်၊ တည်မှီရာကဲ့သို့ ပြုအပ်၊ ခိုင်မြဲစွာ တည်စေအပ်၊ အခိုင်အခံ့ပြုအပ်၊ ကောင်းစွာ အားထုပ်အပ်သည် ရှိသော် အကျိုးတရား ဆယ့်တစ်မျိုးတို့ကို မျှော်လင့်နိုင်ကုန်၏။ အဘယ် ဆယ့်တစ်မျိုးတို့နည်း ဟူမူ -
ချမ်းသာစွာ အိပ်ရ၏၊ အိမ်မက်ဆိုး မမက်၊ လူတို့၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကို ခံရ၏၊ လူမဟုတ်သူ (နတ်၊ သားရဲ၊ ဘီလူး) တို့၏ ချစ်ခင်ခြင်းကို ခံရ၏၊ နတ်တို့၏ စောက်ရှောက်ခြင်းကို ခံရ၏၊ (မေတ္တာပွားများသည့်) သူကို မီး အဆိပ် လက်နက်တို့သည် မစွဲကျ မထိခိုက်နိုင်၊ လျှင်မြန်စွာ စိတ်တည်ကြည်၏၊ မျက်နှာအဆင်း ကြည်လင်၏၊ မတွေဝေပဲ သေရ၏၊ အလွန်မြင့်မြတ်သော (အရဟတ္တဖိုလ်) တရားကို ထိုးထွင်းမသိသော် ဗြဟ္မာပြည်သို့ ရောက်ရ၏။
(ဆောင်ပုဒ်)။ ။အိပ် နိုးချမ်းသာ၊ ကောင်းစွာ အိပ်မက်၊ ချစ်လျက် လူ နတ်၊ စောင့်လတ် နတ်များ၊ မီး ဆိပ် ဓား တို့၊ ရှောင်ရှား ကိုယ်မှာ၊ လျင်စွာ စိတ်တည်၊ ရွှင်ကြည်မျက်နှာ၊ သေခါမတွေ၊ လားလေဗြဟ္မာ၊ ဆယ်တစ်ဖြာ သည်၊ မေတ္တာ ပွားမှု အကျိုးတည်း။
(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော် ၁၁၊ ၂ အနုဿတိဝဂ်၊ မေတ္တာသုတ်)
The Blessings of Loving-kindness
If, O monks, the liberation of the mind by loving-kindness is developed and cultivated, frequently practised, made one's vehicle and foundation, firmly established, consolidated, and properly undertaken, eleven blessings may be expected. What eleven?
One sleeps peacefully; one sees no bad dreams; one is dear to human beings; one is dear to non-human beings; one will be protected by devas; fire, poison and weapons cannot injure one; one's mind becomes easily concentrated; one's facial complexion will be serene; one will die unconfused; andfone does not penetrate higher, one will be reborn in the Brahma-world. (XI, 16)
(Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi, (Trans & ed.) 2005, Numerical Discoursed of the Buddha, (An Anthology), 4th printing, Vistaar Publication, New Delhi, p.273.
Parents in the Buddhist Perspective
"Brahma (mighty God)", monks, isaterm for father and mother. "The early teachers" isaterm for father and mother. "The early deities" isaterm for father and mother. "Those worthy of worship" isaterm for father and mother. And why? Parents are of great help to their children, they bring them up, feed them and show them the world.
(AN. IV, 63)
I declare O monks, that there are two persons one can never repay. What two? One's mother and father.
Even if one should carry about one's mother on one shoulder and one's father on the other and while doing so should liveahundred years, reach the age ofahundred years; and if one should attend to them by anointing them with salves, by massaging, bathing and rubing their limbs, and they should even void their excrements there - even by that would one not do enough for one's parents as the supreme lords and rulers over this earth so rich in the seven treasures, one would not do enough for them, one would not repay them. What is the reason for this? Parents do much for their children: they bring them up, feed them and guide them through this world.
But O monks, one who encourages his unbeleaving parents, settles and establishes them in faith; who encourages his immoral parents, settles and establishes them in virtue; who encourages his stingy parents, settle and establishes them in generosity; who encourages his ignorant parents, settle and establishes them in wisdom - suchaone, O monks, does enough for his parents: he repays them and more than repays them for what they have done.
(AN. II, iv, 2)
(Nyanaponika Thera and Bhikkhu Bodhi, 2000, (tran. & ed.), Numerical Discourses of the Buddha, Vistaar Publication, New Delhi, p. 42 -43).
“ကိုယ် ခန္ဓာ နာကျင်သော်လည်း စိတ် မနာကျင်စေရ” ဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိ လေ့ကျင့်ရမည်။
You should train yourself thus: 'even though I am afflicted in body, my mind will be unafflicted.' (Nakulaputa sutta, Khandavagga Samyutta)
အသိပေးခြင်း။ အကြောင်းညီညွတ်ပါက ဆက်လက် ကောက်နှုတ် တင်ပြပေးပါဦးမည်။
Posted by ဘုန်းဉာဏ် at Wednesday, May 05, 2010
ဘုန်းဘုန်း ဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရား စာသားတွေဟာ အကောင်းဆုံး၊အနှစ်သက်ဆုံး ဆိုသောအရာတွေထက် မမှတ်နှိင်အား ပြန်ဖတ်ငြာလည်း မရိုးမအီ ငြိမ်းတည်မြဲ နေဆဲပါပဲဘုရား
ဘုန်းဘုန်းဘုရား အသစ်အသစ်သော တရားစာသား မနှစ်များကိုလည်း စောင့်မျှော်လျှက် သာဓုသာဓုသာဓု မဖောက်မပြန် ဟန်ပန်မပျက် တည်လျှက်ရှိပါစေဘုရား။
ဘုန်းဘုန်း ဘုရား တပည့်တော် အနှစ် ဆိုရာတွင် စာမှားရွင်း သွားခြင်းအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါဘုရား ကျော်စိုးဝင်း
Comment ရေးပေးကြတာ အရမ်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
▼ 02/05/10 - 09/05/10 (1)